Ciyaaraha – Page 5 – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Aabaha Lionel Messi oo ugu dambayn aqbalay qandaraas cusub
July 18, 2016	Leave a comment 55 Views
Mustaqbalka Laacibka u dhashay Argentina ee Camp Nou waxa soo galay shaki kaddib markii lagu helay musuq maasuq canshuureed oo dalka Spain ah, warar waxaa jiray la’isla dhexmarayey in ciyaaryahanka laftiisa uusan ku faraxsaneyn kooxda sababo la xiriira taageero la’aan. Taas waxa ay keentay in Messi lala xiriiriyo Chelsea iyo Manchester City walow ay Barcelona markii dambe qaaday olole ay ...
Kooxo waa weyn oo isku arkaya Koobka International Champions Cup
July 18, 2016	Leave a comment 57 Views
Kooxda saaxiibtinimo ee International Champions Cup ayaa waxaa ku tartami doona qaar ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican Yurub, tababarayaasha ugu sareeya ciyaarta iyo kooxaha ugu waa weyn dunida kuwaasoo dunida dacaladeeda ku tartami doona isbuucyada soo socda. Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Chelsea, Manchester City iyo Manchester United ayaa ka mid ah 17 kooxood oo xagaagan u ...
Ronaldo oo Shaashadaha ka Soo muuqday isagoo Ciyaarsiinaya Caruurtiisa
July 13, 2016	Leave a comment 74 Views
Kabtanka Xulka qaranka Portugal Cristiano Ronaldo ayaa diyaarad qaas ah fasax kula qaadanaya qaar ka mid ah qoyskiisa. Weeriryahanka Kooxda Real Madrid iyo Xulka qaranka Portugal Cristiano Ronaldo ayaa ku guulaystay Koobka qaramada Qaarada Yurub ka dib guuldaro 1-0 ay ku qaarijiyeen Wiilashii martigelinaayay tartanka Euro 2016-ka 31-sano jirkana ayaa bartiisa Instagram soo dhigay Sawir ay si wada Jir ah ...
Barcelona Ayaa Dagal ugu Jirta Laacibka Hector
July 13, 2016	Leave a comment 42 Views
Barcelona ayaa ku soo biirtay hardanka loogu jiro saxiixa xiddiga Xulka qaranka Germany iyo Kooxda FC Köln Jonas Hector, sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya Spain. Sida ay warinayso jariirada Sport ee gobolka Catalania, Kooxda Barcelona ayaa tartan adag kala kulmi doonta Kooxaha reer England ee Liverpool iyo Tottenham Hotspur, ka dib bandhigii qurxonaa ee Cayaariyahan Hector uu ka sameeyay ...
Jeison Murillo Ayaa ku Rajo Weyn in uu ku Biiro Kooxda Arsenal
Arsenal ayaa indhaha ku haysa daafaca kooxda reer Talyaani ee Inter Milan Jeison Murillo. Sky Italia ayaa sheegay in Arsenal ayaa rajo ka qabta in ay heli karto saxiixa Cayaariyahan Murillo ka hor bilowga xagaaga so aadan. Gunners ayaa la rumeysan yahay inay xiiso u qabto daafaca reer Colombia ee Murillo, xilli ay soo bandhigtay qiimo lacageed gaaraya ...
Blaise Matuidi oo Lagu Yiri Waa Lagaa Fiirsanayaa
July 11, 2016	Leave a comment 61 Views
Kooxda Manchester United ayaa odorosaysa xaalada Cayaariyahan Blaise Matuidi, ka dib markii uu ka gaabsaday mustaqbalkiisa Kooxda PSG. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Kooxda PSG iyo Xulka Les Blues-ka Matuidi ayaa la filayaa in uu kulan la qaato qaar ka mid ah Madaxda Kooxda Paris Saint-Germain, si uu ugala hadlo macquulahaanshiyaha in uu ka tago gagida Caanka ah ee ...
Alexandre Lacazette oo Liiska Kooxdiisa Qarka U saaran in Laga Tiro
July 11, 2016	Leave a comment 60 Views
Tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa diyaar u ah in uu kulan la qaato Weeraryahanka Kooxda Lyon Alexandre Lacazette. Shabakada Telegraph ayaa sheegtaysa in Arsenal ay diyaar la tahay qiimaha lagu bur burin karo adeega Lacazette oo dhan £ 34-million oo ginni. 25-sano jir ah ayaa lala xiriirinayaa Kooxda West Ham, balse Kooxda Lyon ayaa ku dalbanaysa qiimaha lagu bur ...
July 6, 2016	Leave a comment 28 Views
Jose Mourinho ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu maamulo Manchester United, isaga oo ku adkaystay in uu joogo “meeshii uu rabay.” 53 jirka reer boortaqiis ayaa intaas ku daray in shaqadani ay tahay shaqo uu qof kaste jecelyahay in uu qabto isla markaasna aysan fursad u helin, balse uu isagu helay jaaniskaas. Tababarihii hore ee Chelsea wuxuu ...
Ciyaatyahan Pistorius oo Go,aan Laga Gaaray
July 6, 2016	Leave a comment 21 Views
Oscar Pistorius, oo ah ciyaaryahan naafa ah oo u dhashay dalka Koonfur Afrika, ayaa lagu wadaa in maanta uu ogaado in uu xabsi u geli doono dilka saaxiibtii Reeva Steenkamp iyo inkale. Ciyaaryahankan ayaa racfaan ka qaatay xukun horay loogu riday oo ahaa inuu si kama ah u dilay saaxiibtii, waxaana haatan suuragal ah inuu wajaho xarig 15 ...
Kooxda Kubada Cagta ee Heegan FC ayaa shaacisay in ay la soo saxiixatay ciyaaryahan Cabdi Qani Buule Abgaalow
July 3, 2016	Leave a comment 44 Views
Abgaalow ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed lagu qanco horyaalkii soo idlaaday 2015/16 oo ay ku guuleysatay kooxda banadir sports Club. Heegan ayaa dooneysa in ay dib habeen isku sameeyso madaama ay sido kale dooneysa ciyaaryahano badan sida Mahad Saha oo ka tirsana kooxda heerka labaad ku laabatay Sahafi Fc. Abgaaloow ayaa markale la midoobi doono macallinkiisii hore ee Shiikh Saalax ...